သားဖြစ်သူ ဘုန်းမင်းနေလရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ ငယ်ဘဝကပုံလေးတွေနဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော် – Cele Top Stars
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော ခင်ဇာခြည်ကျော် ကတော့အကယ်ဒမီဆုပါ ရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အနုပညာရှင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ခင်ဇာခြည်ကျော်က ယနေ့အချိန်အထိတိုင်အောင် အနုပညာအလုပ်တွေကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့အပြင် သူမရဲ့ကလေးတွေကိုပါ မြေတော င်မြှောက်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်…. ။
သားတစ်ယောက်၊ သမီးတစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်က ကလေးတွေကို တာဝန်ကျေပွန်စွာ စောင့်ရှောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ခင်ဇာခြည်ကျော်ရဲ့သားကြီး ဘုန်းမင်းနေလနဲ့ သမီးငယ်လေး ထင်သစ္စာတို့ကလည်း ချစ်မေမေရဲ့အနုပညာအမွေတွေကို ဆက်ခံထားတဲ့ မျိုးဆက်သစ် အနုပညာရှင်လေးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်…. ။
အခုလည်း ယနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သားကြီး ဘုန်းမင်းနေလရဲ့ မွေးနေ့လေးကို ငယ်စဉ်က အမှတ်တရ ပုံလေးတွေနဲ့အတူ ” Happy Birthday ပါ မေမေ့သားကြီးရေ အသက် ၂၀ ပြည့်ပြီ နော် သားကြီးဘုန်းမင်း အသက်ရှည် ကျန်းမာပြီး လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေ သားရေ ❤️❤️❤️ ” ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့အတူ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလာပါတယ် ။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဘုန်းမင်းနေလရဲ့ ငယ်ဘဝ ပုံလေးတွေကိုဝေမျှပေး လိုက်ပါတယ်…. ။
Credit– Cele Star
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြော ခငျဇာခွညျကြျော ကတော့အကယျဒမီဆုပါ ရရှိထားတဲ့ ပရိသတျအခဈြတျော အနုပညာရှငျလေးပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ခငျဇာခွညျကြျောက ယနအေ့ခြိနျအထိတိုငျအောငျ အနုပညာအလုပျတှကေို တစိုကျမတျမတျ လုပျကိုငျနတေဲ့အပွငျ သူမရဲ့ကလေးတှကေိုပါ မွတေော ငျမွှောကျပေးနတော ဖွဈပါတယျ…. ။
သားတဈယောကျ၊ သမီးတဈယောကျပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ခငျဇာခွညျကြျောက ကလေးတှကေို တာဝနျကပြှေနျစှာ စောငျ့ရှောကျနတော ဖွဈပါတယျ ။ ခငျဇာခွညျကြျောရဲ့သားကွီး ဘုနျးမငျးနလေနဲ့ သမီးငယျလေး ထငျသစ်စာတို့ကလညျး ခဈြမမေရေဲ့အနုပညာအမှတှေကေို ဆကျခံထားတဲ့ မြိုးဆကျသဈ အနုပညာရှငျလေးတှေ ဖွဈကွပါတယျ…. ။
အခုလညျး ယနမှေ့ာကရြောကျတဲ့ သားကွီး ဘုနျးမငျးနလေရဲ့ မှေးနလေ့ေးကို ငယျစဉျက အမှတျတရ ပုံလေးတှနေဲ့အတူ ” Happy Birthday ပါ မမေသေ့ားကွီးရေ အသကျ ၂၀ ပွညျ့ပွီ နျော သားကွီးဘုနျးမငျး အသကျရှညျ ကနျြးမာပွီး လိုအငျဆန်ဒတှေ ပွညျ့ဝပါစေ သားရေ ❤️❤️❤️ ” ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့အတူ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလာပါတယျ ။ ပရိသတျကွီးအတှကျ ဘုနျးမငျးနလေရဲ့ ငယျဘဝ ပုံလေးတှကေိုဝမြှေပေး လိုကျပါတယျ…. ။